"Cristiano Ronaldo ayaa i waayay" - AfriPulse - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS "Cristiano Ronaldo waa uu i waayay" - AfriPulse
Cristiano Ronaldo ayaa ku biiray Juventus xagaagii lasoo dhaafay ka dib farqiga u dhexeeya horyaalka La Liga sida ay qortay Lionel Messi.
Ciyaaryahanka reer Argentine ayaa qirtay inuu ka maqan yahay Cristiano Ronaldo. Messi ayaa sanadkan bilaabay 2019 isagoo Barca hogaamineysa horyaalka La Liga islamarkaana u soo baxaya wareega quarter-finalka Champions League.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa xilli ciyaareed xun ku jirtay tan iyo markii uu ka tagay Ronaldo. Ciyaaryahanka ayaa ku guuleystay guushii Madrid, isagoo ku guuleystay Champions League saddex jeer oo isku xiga.
Wareysi uu la yeeshay idaacadda C5N, Lionel Messi ayaa sheegay inuu ka tagay kooxdii ugu weynayd. "Waxaan ka maqan Cristiano Spain. Way fiicneyd inaan halkaan joogo, xitaa haddii ay igu dhibtooneysay inaan arko isaga oo ku guuleysta koobab badan. Waa inaan qirto, waa ay fiicnaan laheyd haddii uu weli jiro, " ayuu weeraryahanku u sheegay raadiyaha.
Lionel Messi ayaa sidoo kale ka hadlay xirfadiisa kubada cagta ee xulka qaranka iyo go'aanka ah inuu fasax ka qaato Koobka Adduunka.
Argentina ayaa lagu reebay wareega 16ka, Lionel Messi ayaana aaminsan in qaab ciyaareedka liita ee kooxda inay tahay in loo xilsaaro inay si dhaqso ah ugu dhiirigeliso ciyaartoyda da'da yar inay noqdaan mas'uuliyadaha kooxda.
"Waxaan u maleynayaa isbeddelka isbedelka ayaa ahaa mid aad u kacsan. Waxay qaadan kartaa waqti dheer. Waa inaad waqti iyo kalsooni siisaa dadka dhalinyarada ah.
Isbedelku aad ayuu muhiim u ahaa.
Si aad u noqoto mid macquul ah, waxay qaadataa shaqo badan si ay u noqoto koox xoog leh. Carruurtan ayaa ciyaaray kulamo aad u yar oo loogu talagalay xulka qaranka. Waa inaynu dulqaadanno, shaki iigama jiro inaan dib ugu soo laabanno qaab ".
Waxaa laga soo xigtay: kubada cagtamercato